Hiran State - News: Jaaliyada Hiiraan ee Kenya oo shirar la leh wasiiro ka socda Hiiraan State
Jaaliyada Hiiraan ee Kenya oo shirar la leh wasiiro ka socda Hiiraan State
Sabti 26,Feb 2011 (HSOL)-Ku dhawaad ilaa 5 wasiiro oo iskugu jiro kuwo ka tagay dibada iyo kuwo hore u sii joogay dalkaasi Kenya oo shirar kala duwan la leh qeybaha kala duwan ee jaaliyada reer Hiiraan ee Kenya.
Wasiirada gaaray dalkaasi Kenya maalmo ka hor ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirada kala ah wasiirka Haweenka iyo Arimaha qoyska Dr's Istanbul Haaji C/samad iyo wasiirka dhalinyarada Sportiga shaqada iyo shaqaalaha marwo Sucaado Diiriye Hasan oo dhawaantan ka tageen waqooyiga America. waxaa sidoo kale hore ugu sugnaa dalkaasi Kenya wasiiro kale oo iyaguna ay ka mid yahiin wasiirka Maaliyada Mudane C/qadir Shiikh Muumin. Wasiirka beeraha Dr Mohamed Farah Makaraan oo dhawaantan safar shaqo uga yimid wadamo African ah si loo horumariyo wax soosaarka beeraha Hiiraan State.
waxaa kale oo jooga halkaasi wasiirka Garsoorka iyo arimaha diinta Prof Ibraahim Shiikh Hasan. waxaa kale oo isaguna ku sugna halkaas Gudoomiyaha maxkamada sare ee dowlad goboleedka Hiiraan State Mudane C/qadir Rooble Naxar( Ahalu Qeyr).
Wasiirada ayaa durbaba bilaabay la kulanka qeybaha kala duwan ee jaaliyada Hiiraan State ee Kenya ku nool iyagoo shirar badan kedib shirkii ugu weynaa abaabulaya amaba hada lagu guda jiro. dowlad goboleedka Hiiraan State madaxtooda marka laga reebo tiro yar oo dibada howlo shaqo u joogi doona intooda badan waxaa looga yeeray gudaha kedib markii madaxweynaha Hiiraan State amar ku bixiyey in shirka ugu horeeya ee golaha wasiirada ka dhaco Mogdisho kedibna halkaas howlaha xukumada lagu go,aamiyo.
Dhawantaan ayey aheyd markii ay dalkaasi Kenya ka amba baxeen wafti uu hogaaminayey wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta HS Mudane Aden Cabdi Wayax iyo agaasimaha guud ee madaxweyne ku xigeenka Hiiraan State Dr Buqaari ay ka dageen magaalada Mogdisho oo uu dhawaantan ka dhacayo shir ay hada qaban qaabadiisu socoto.
Shacabka Hiiraan ayaa iyagu u soo jeedinaya maamulka Hiiraan State talooyin iskugu jira dhaliilo iyo amaanba.
Dhaliiilaha maamulka Hiiraan State loo jeediyo waxaa ka mid ah iyadoo mudo 6 bilood ah aan ilaa hada la dhisin amaba aan la magacaabin wakiiladii qurbaha u joogi lahaa amaba mateli lahaa dowlad goboleedka HS halka ay howsha ka wadaan wadamada ay joogaan wasiiro iyo masuuliyiin kale oo HS ah halkii jaaliyadaha wadamada iyaga la howl galin lahaa emailada u imaanayo HS.COM ee ugu badan ee Hiiraan State lagu dhaliilo ayaa u badan ka hadalka arintaas. inkasta oo uu arintaasi ku guda jiro wasiirka xiriirka caalamiga Hiiraan State.
Wax yaabaha lagu amaanay HS mudad ay jirto iyo shacabka taageero waxa ay ku taageeraan. waxey leeyahiin HS waa bilaaw fiican waana maamulka kaliya ee ku yimid rabitaanka shacabka wado fiicana loo maray marka loo eego maamuladii hore ee laga hirgalin jiray Somaliya amaba Hiiraan. waxaa kale oo ay leeyahiin inta samaha jecel waxaanu u taanasuleynaa maamulkan maadama kuwa isaga ka danbeeya ay shacabka mahadin doonaan oo isagu yahay maamul jidka u xaaraya maamulada isaga ka danbeeya, taasina waxey sababtay in hada muwaadiniinta Hiiraan bilaabaan in ay u tanaasulaan Hiiraan State si ay howlaha adag ee hor yaala ugu fudutaato halkii la dhaleeceyn lahaa.
· admin on February 26 2011 13:07:09 · 0 Comments · 2274 Reads ·
14,584,246 unique visits